Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti VaGeorge Gangarahwe vaimirira Zanu Pf musarudzo yakaitwa neMugovera kuMhondoro Mubayira ndivo vakakunda.
VaGangarahwe vakaita mavhoti zviuru gumi nezvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nezvina, ukuwo VaNyanganya vachiita mavhoti chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nematanhatu.
Vachiratidza mufaro mushure mekunzwa mashoko ekukunda kwavo, VaGangarahwe vakati havana kukunda VaNyanganya nebato ravo chete, asi vakunda mapato ose anopikisa munyika sezvo vainge vachikokera nhengo dzavo muchivande kuti dzivhotere VaNyanganya.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZanu PF mudunhu reMashonaland West, VaEphaim Chengeta, avo vanoti kukunda kwebato ravo chiratidzo chekuti hapana bato rinopikisa richakunda Zanu PF mudunhu rose.
VaGangarahwe vanoti vachaita zvirongwa zvebudiriro zvakawanda zvichayamura zvikuru sei vechidiki kuti vasashandiswe kuita zvakaipa.
Amai Muzvare Getrude Rwizi vanobva munzvimbo yamambo Rwizi, vanoti vari kutarisira kuyamurwa kutanga maprojects akaita sekupfuya huku kuti dunhu ravo ribudirire.
Asi mumwe mugari wekwaMubayira, VaPanashe Musunami, avo vanoti havana kuvhota, vanoti Zanu PF yaizvikwikwidza sezvo mapato makuru anopikisa vakaramba kukwikwidza.
VaMusunami vanoti sarudzo yesvondo rapera haina shanduko yainounza mukurarama kwavo.
VaNyanganya vainge vasipo apo paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo uyezve bato ravo rainge riine vaongorori vashoma panzvimbo makumi mashanu nesere dzaivhoterwa muma wadhi mapfumbamwe.
Sarudzo iyi yakaitwa mushure mekunge vaimbomiririra Mhondoro Mubayira, VaSylvester Nguni, vadzingwa mubato reZanu Pf vachipomerwa mhosva yekutsigira vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, avo vakadzingwawo mubato iri gore rapera.
Nhengo dzebazi repamusoro rePolitburo mubato reZanu PF dzaimbeya mbeya muMhondoro Mubayira neMugovera dzinosanganisira mukokeri wemisangano, VaSaviour Kasukuwere, gurukota rezvedzidzo yepamusoro, Professor Jonathan Moyo, pamwe nemutungamiri wedare re Seneti, Amai Edna Madzongwe.